Okumangazayo ngokuhlukana kwamabhulokhi angu-2 ukusuka olwandle, imizuzu emi-5 yedolobha
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Stefany
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Stefany izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elihle elisendaweni yase-El Prado e-Santa Marta, eseduze kakhulu nolwandle, nezinye izindawo ezinjengalezi: La Marina, Bahía beach, Parque de los Novios, amabha, izindawo zokudlela; lapho uzothola khona ukunethezeka, ukuzimela kanye nokuthula izinsuku ezimbalwa zokuphumula noma ukuhlala kamnandi ohambweni lwakho.
Itholakala esitezi sesibili. Ungahamba uye kumasayithi amakhulu enkabeni yedolobha kanye netheku ngenxa yendawo enhle yefulethi.
Ifulethi linamakamelo okulala angu-2, igumbi lokugezela eli-1, igumbi lokuphumula elinombhede wosofa, igumbi lokudlela, ikhishi, linezitsha ezanele. Izingubo zokulala ezisezingeni eliphezulu namathawula nezinye izinto zokugeza. Ine-air conditioning kuphela ekamelweni elingu-No.1 kanye nabalandeli ekamelweni elingu-No.2 kanye negumbi lokuhlala, (ngokujwayelekile ifulethi linomoya omkhulu). Amanzi endlini yokugezela asivivi ngenxa yesimo sezulu, kodwa ayikho i-heater (ngokuvamile ayisetshenziswa kulesi sifunda), ungakwazi ukupaka phambi kwendawo yokuhlala, nakuba sincoma ukuthi uchithe ubusuku endaweni yokupaka eseduze. okuningi. Sihlomise yonke into ngokunethezeka kwakho engqondweni.
4.75 ·91 okushiwo abanye
Ngokuvamile, indawo yomakhelwane iphephile futhi ithulile.
Ngeke nje ngikunikeze amafulethi anethezekile ngentengo enhle, kodwa futhi nezimpendulo ezisheshayo kanye nokunaka yonke imibuzo nezicelo ongase ube nazo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngizotholakala amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngesonto.
Ngeke nje ngikunike nje kuphela izindlu ezinethezekile nezinentengo enhle kodwa futhi nezimpendulo ezisheshayo nokunaka yonke imibuzo nezicelo ongaba nazo lapho uhlala khona. Ngizotholakala 24/7.
Ngeke nje ngikunikeze amafulethi anethezekile ngentengo enhle, kodwa futhi nezimpendulo ezisheshayo kanye nokunaka yonke imibuzo nezicelo ongase u…
UStefany Ungumbungazi ovelele